Apple iPod | IPhone nhau
El iPod yakanga iri yekutanga apple music player, rakakura rekutengesa rakabudirira Zvino iri mhuri hombe, kubva ku iPod nano kana Shuva kusvika kuPod Touch, mukoma weiyo iPhone asi isina foni iyo inogovera yayo iOS inoshanda sisitimu. Tichataura pamusoro penyaya nekuvandudzwa kweumwe neumwe wavo, uye kunyanya nezve iPod Touch, nekuti yakavakirwa paIOS unogona kushandisa zvakafanana maficha seiyo iPhone kana kugovana nzira dzako dzekusungwa.
kubudikidza louis padilla inoita 1 mwedzi .
Apple yakapa kuoneka kwechokwadi kune iPod mushure mekuzivisa kuti iyo chete modhi yakaramba kutengeswa, iyo…
Chechishanu-chizvarwa 16GB iPod Kubata haichazogashira rutsigiro rwepamutemo
kubudikidza Ignatius Room inoita 10 mwedzi .
Sezvo makore anoenda, Apple inoronga zvigadzirwa zvayo mumapoka akasiyana zvichienderana nemakore apfuura kubva ...
Apple inowedzera yazvino iPod Nano kune vintage mudziyo runyorwa
kubudikidza Karim Hmeidan inoita 2 makore .
Chave chiri chimwe chemidziyo inosarudzwa nevazhinji vashandisi veApple, chishandiso chakagadzira nhoroondo ...
Iyo iPod Nano ichave chikamu cheApple's Vintage zvishandiso
kubudikidza Ignatius Room inoita 2 makore .
Apple yakatanga iPod Nano yekutanga muna 2005 chishandiso chinogona kukwana muhomwe chero ipi nekuda kwekugadzirwa kwayo diki
Yekuda kuziva kwechitatu-chizvarwa iPod prototype inodonha
kubudikidza Miguel Hernandez inoita 2 makore .
Iyo Cupertino kambani iri kutambura nhevedzano yekudonha mumwedzi yapfuura iyo pasina mubvunzo ichave ichigadzira ...
Apple inobvisa iyo application yakashandura iPhone yedu kuita iPod
kubudikidza Ignatius Room inoita 3 makore .
Kwemakore akati wandei takaona kuti dhizaini yekare yakadzoka sei mufashoni, kwete mune zvekupfeka chete, ...
Apple zvisingatarisirwi inovandudza iyo iPod Kubata uye inowedzera iyo A10 Fusion chip
Pasina chiziviso chisati chaitika uye imwe nguva mushure mehuwandu hwenhepfenyuro dzakatangwa pamusoro pekugona kuitika kwe ...
Inogona here mangwana kuve mukana weiyo iPod Kubata?
Uye ndezvekuti mushure menyaya dzese dzakapihwa nekambani yeCupertino kubvira nezuro mangwanani ne ...
Chizvarwa chechinomwe iPod chinogona kurova musika gore rino
Iyo iPod touch ndiyo yakakanganwika neApple, chishandiso icho chatichiri kukwanisa kuwana chiri kutengeswa ...
Chizvarwa chechitanhatu iPod nano haichagashiri rubatsiro rwepamutemo kubva kuApple
kubudikidza Ignatius Room inoita 5 makore .
Kana pangosara rinopfuura vhiki kuti vakomana veC Cupertino vape zviri pamutemo iyo itsva iPhone 8, iPhone ...
Apple inobvisa iPod Nano uye iPod Shuffle kubva kune ayo ezvitoro zvepamhepo
kubudikidza Jordi Gimenez inoita 5 makore .
Izvi tinogona kutaura kuti yaive mugumo wakaziviswa uye ndewekuti nguva refu yapfuura aya maPod haana kugamuchira chero ...
Isu tinoongorora iyo nyowani iPod Kubata 6G zvakadzama